Maxaa Keenay In Waqtigan Radio Muqdisho Af-Taliyaani Lagu Baahiyo? | Xaqiiqonews
Markii ugu horeysay muddo sano ka dib, idaacadda dowladda ay leedahay ee Radio Muqdisho ayaa lagu tabin doonaa af-Taliyaani muddo 30 daqiiqo ah sida ku qoran heshiis dhawaan DF-ka ay la gashay Taliyaaniga.
WARKA: Ka dib kulan wasiirka warfaafinta Soomaaliya uu la yeeshay safiirka Taliyaaniga Soomaaliya u jooga, waxay labada dhinac kala saxiixdeen qodobo badan oo ay ku jirtay in Raadiyo Muqdisho lagu baahiyo Af-Taliyaan muddo 30 daqiiqo ah maalin walbo.
DHAMMAADKIISA: sanadka markuu ahaa 1911-kii gumeytihii Taliyaaniga waxa uu Xamar ka sameeyey idaacad, idaacadaasi oo noqotay tii ugu horeysay ee Afrika oo dhan laga hirgeliyo.
Intaasi ka dib, sanadkii 1958-kii,Taliyaaniga waxa uu dhidibada u taagay Raadiyoow Muqdisho iyadoo waqtigaasi lagu baahin jiray afafka Soomaaliga iyo Taliyaaniga.
Idaacadda waxaa dib u casriyeeyey Ruushka waxaana markii dambe lagu kordhiyey baahino ku baxaya afaf-ka Amxaariga iyo Oromada, Intiina aan garaneyn afka oromada(Afaan Oromo) waa afka ugu badan ee looga hadlo Itoobiya balse waxaa uu dhibbane u ahaa sababo siyaasadeed ilaa markii ugu horeysay uu jiritaanka afkaasi shaaca ka qaado Radiyoow Muqdisho.
Marka la fiiriyo meesha ay wax ka bilowdeen Wey iska cadahay u jeedada Taliyaaniga ka leeyihiin soo noqoshadooda waxaase isweydiin mudan: maxaa xilligan ku soo beegay? .
Heshiiska dhawaan Taliyaaniga uu la galay DF-ka waxaa ku jiray qalabeyn -sida lagu baahiyey warbaahin dowladda inkastoo aan la xusin nooca qalabeynta.
Wasiir Dubbe oo ka hadlay soo laabashada Taliyaan ayaa xiriirka Soomaaliya ay la laheyd Taliyaaniga ku tilmaamay “saaxibtinimo” isaga oo ka jawaabayey sababta watigan ku soo beegay waxa uu xusay in ay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo af- taliyaan ku hadla.
“Soo laabashadooda waa mid loo baahnaa”. ayuu sii raaciyey.
Dhanka kale dad ka fikir dhiibtay dhaqaaqan cusub ee Taliyaaniga waxa ay ka shakiyeen muhiimadda ay leedahay in idaacadda laga baahiyo Af- Taliyaani iyaga oo is weydiiyey in ay jiri karaan luuqado ka haboon sida Turkiga oo kale.
Raadiyow Muqdisho ayaa hadda lagu baahiyaa Af-soomaali, waxaana xusid mudan in ay jiraan baahino kooban oo ku baxa afafka Carabiga iyo Ingiriiska.